केपीजी सत्ताबाट बाहिर आएर चुनाव लडौं, हिम्मत छ ? | GNN Nepal GNN Nepal केपीजी सत्ताबाट बाहिर आएर चुनाव लडौं, हिम्मत छ ? | GNN Nepal
अदालतमा संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा निर्णय हुन्छ , तर्क र तथ्यका आधारमा निर्णय हुन्छ । यस अर्थमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ, हुन्छ : प्रदीप पौडेल
जनता कोरोना महामारीमा छन् । यसबीचमा राजनीतिक घटनाक्रममा व्यापक बदलाव आएको छ । जनताका समस्याहरुभन्दा प्रदीप पौडेलहरुलाई सत्ताको भोक किन ?
हामीलाई सत्ताको भोक होइन । सिङगो मानव सभ्यता नै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कोर्स सुरु गर्नुभयो । उहाँलाई कसैले अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याएको थिएन । यो विपद्को बेला उहाँ विश्वासको मत लिनेतिर लाग्नुभयो । उहाँको सरकार संकटमा परेकै थिएन । यतिबेला सरकारले जनताका माग र समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेन । सरकारको ध्यान आफू कसरी बलियो हुने भन्नेमै केन्द्रित भयो । लकडाउन सुरु भएदेखिको समयलाई ‘शून्य समय’को रुपमा बनाइनुपर्थ्यो ।
यो समयमा सरकार लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले कुनैपनि गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्था हुन्थ्यो । यो समयलाई कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले कुनै कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन । बरु झन संक्रमण बढाउनेतिर सरकार उन्मुख भयो । त्यसकारण यो अवस्था सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले नै ल्याएका हुन् ।
तपाईले भन्नुभयो हामीलाई सत्ताको भोकमरी छैन । भोकमरी थिएन भने बहुमत छ भन्दै शीतल निवास किन गएको ? बहुमतको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत किन धाएको ?
यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछिको कुरा हो । प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री अयोग्य हुन्छ । त्यही अयोग्य व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला मार्गप्रशस्त गरे भन्नुहुन्छ । मार्गप्रशस्त गर्न उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा फेरि नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत पाउने आशै थिएन । त्यही भएर उहाँले संविधान कुल्चनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संविधानको प्रक्रियाअनुसार यो कदम चाल्न बाध्य भएको हो । केपी शर्मा ओलीको विकल्पका रुपमा हामी आफैं प्रस्तुत भएका हौं । १४९ सांसदको आधिकारिक हस्ताक्षरसहित हामी राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यौं । तर राष्ट्रपतिले पनि संविधानमाथि नै प्रहार गरेर रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । राष्ट्रपति केपी ओलीको अनावश्यक सहयोगी हुनुभयो । उहाँ ओलीको विकल्प चाहनुहुन्नथ्यो । त्यसो भएको हुनाले कांग्रेस वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जान बाध्य भएको हो ।
तपाईहरुलाई जनतामाझ जान केको समस्या ? पराजित भइन्छ भन्ने समस्या हो ?
पहिलो कुरा प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्ष पुगेको थियो भनेपनि यस्तो बेलामा चुनाव गर्नु हुँदैनथ्यो । अहिले त प्रतिनिधिसभाको अवधि बाँकी नै छ । सभा विकल्प दिन पनि तयार छ । सरकारले जनतालाई खोप लगाउन नसक्ने रुकचौरामा अनुदान थाप्दै हिँड्नुपर्ने । चुनावका लागि जनता बाँच्नुपर्दैन रु आजको आवश्यकता खोप हो कि चुनाव हो ? सरकारसँग पैसा नभएका कारण नागरिकले खोप लगाउन नपाएका होइनन् । सरकारको लापरबाहीका कारण यो अवस्था आएको हो ।
देशमा यत्रो भयावह छ । किन चाहियो चुनाव ? चुनाव हुँदा हामीलाई नै फाइदा छ नि । केपी ओलीजीले चुनाव चाहनुभएको होइन । उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर चुनाव गराउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । हामी केपी ओलीलाई चुनौती दिन चाहन्छौं सत्ताबाट बाहिर आएर चुनाव लड्नुहोस् हिम्मत छ कांग्रेसलाई हराउने ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिर आएर चुनाव लड्ने हो भने केपी ओलीले चुनाव नै जित्नुहुन्न ।
त्यसकारण हामी जनतामाझ जान डराएका होइनौं । फरक के हो भने जनतामा जाने कतिबेला हो रु हाम्रो नयाँ संविधानले पनि स्थिरताका परिकल्पना पनि गरेको छ । संविधानले मध्यावधि चुनाव नगर्ने भनेको छ । चुनावले कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भनेर संविधानमाथि प्रहार भएको कुरालाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बसिरहने ? चुनाव गर्ने पैसाले जनतालाई खोप दिउँ न । अनि नेतृत्वको हिम्मत त्यसै देखिहाल्छ नि । अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेस थप जिम्मेवार भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । तपाईहरुलाई त प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना नै हुन्छ भन्ने लाग्या होला होइन ?
हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुँदैन भन्ने कुरा परिकल्पना मात्र हो । प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको छ । हामीले अदालतको प्राङगनमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेका छौं । राष्ट्रपति संविधानको होइन केपी ओलीको संरक्षक भएको हुनाले यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।
राजनीतिक मुद्दालाई अदालतमा लगेर समाधान गर्ने अवस्था राष्ट्रपतिले नै सिर्जना गर्नुभएको हो । उहाँले विधि, व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नुभएको छ । त्यसकारण प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना नहुने कुरै हुँदैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ हुन्छ । अदालतमा संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा निर्णय हुन्छ , तर्क र तथ्यका आधारमा निर्णय हुन्छ । यस अर्थमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ ।
अब तपाईकै पार्टीतिर लागौं । कांग्रेस पार्टी समस्यै समस्याको जञ्जिरमा छ । तपाईहरुले अहिलेसम्म १४ औं महाधिवेशन गर्न सक्नुभएको छैन । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व कहिले चयन गर्नुहुन्छ ?
आगामी भदौको ७ गते नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुन्छ । कोरोना महामारीकै बीचमा महाधिवेशन हुन्छ र हुनैपर्छ । अधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था छैन ।
वर्तमान सभापतिले महाधिवेशन गर्न चाहनुभएको छैन नि !
सभापतिले के गर्न खोज्नुभएको छ त्यो मलाई थाहा छैन । सभापतिले भन्नुभयो भनेर पार्टीको वैधानिकता नै समाप्त गर्ने कुरा त भएन । उहाँले भदौको ७ गतेभन्दा २ ४ दिन सारौं भन्नुभयो भने त्यो एउटा कुरा होला तर भदौभन्दा पछि पार्टीको महाधिवेशन सर्दै सर्दैन ।
अन्त्यमा, राजनीतिकर्मीभन्दा एक सामान्य नागरिकका हिसाबले भनिदिनुहोस् जनता महामारीमा छटपटिरहेका छन् । यस्तो बेलामा जनताका समस्या समाधान नहुँदाखेरि तपाईलाई कतै न कतै आत्मग्लानि महसुस हुँदैन ?
मैले आत्मग्लानि गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । देशकोे पछिल्लो राजनीति निराशाजनक अवस्थामा छ । यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ । निराशाबीच पनि आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ । कोरोना महामारी छ ।
यस्तो समयमा सुरक्षा अपनाएर नकारात्मक कामविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न छोड्नुहुन्न । गलत व्यक्तिका विरुद्ध आवाज उठाउन पछि पर्नुहुन्न । यो व्यवस्था र संविधानको गल्ती होइन । यो व्यक्तिको गल्ती हो । यस्ता गल्तीहरुका विरुद्ध हरेक नागरिकहरुले खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको कारबाहीपछि विशाल भट्टराईको प्रतिक्रिया- ‘अध्यक्ष बेगरको कस्तो बैठक हो ?’
असोज १ बाट भर्नाका लागि मात्र विद्यालय खुल्ने
भदौ १७ गते, २०७८